Rakipahalalana momba ny finoana katolika
Ny valiny tsara indrindra: Inona no atao hoe fiovam-po araka ny fiangonana katolika?
Sokajy: Momba ny fivavahana 0
Inona no atao hoe fiovam-po ho anao? Ny fiovam-po dia teny iray avy amin'ny latsa-dresaka Conversio izay manondro ny fihetsika sy ny vokatry ny fanovana na fanovana ...
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fivavahan'ny finoana tokana?
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fivavahan'ny finoana tokana? Endri-javatra miavaka. Ny finoana tokana, amin'ny fironana ara-pinoana, dia miavaka amin'ny:
Inona no nangatahin'i Jesosy tamin'Andriamanitra tamin'ny vavaka?
Nahoana ianao no tokony hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy? Mampianatra antsika hivavaka i Jesoa Kristy Tompo ary handray fanekempihavanana izay horaisina. “Noho izany,…
Inona ny fivavahan'ny Tahuantinsuyo?
Nanao ahoana ny fivavahana tany Tahuantinsuyo? Ny fivavahana nambaran'ny Incas dia polytheistic, izany hoe andriamanitra maro be no notompoina tamin'ny lanonana notohanan'ny ...
Ny valiny tsara indrindra: inona ny arikanjian'ny fahalalana?
Inona ny arikanjely anio alatsinainy? Ny andro fanajana ny arikanjely Jofiel dia Alatsinainy, ka izany no fotoana tsara hanokanana ...
Inona no nangatahin'i Joany Batista tamin'i Jesosy?
Inona no nangatahin'i Joany Batista tamin'i Jesosy? Nandefa azy ireo tany amin'i Jesosy i Joany Batista niaraka tamin'ny fanontaniana lehibe raha Izy no ...
Inona no iantsoana ny toeran'ny fiangonana rosiana?
Firy ny fiangonana manana an'i Russia? Nanampy koa i Patriarch Kiril fa ny fiangonana dia mifehy tempoly 36.900 462 izay anaovana fanompoana, 482 monasiteran'ny moanina ary monasiter XNUMX ho an'ny ...
Inona ny didy lehibe indrindra nomen'Andriamanitra an'i Mosesy?
Inona ny didy lehibe indrindra? Hoy ny navalin'i Jesosy: 'Ho tia ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ianao….
Inona no fomba tsara indrindra hahazoana ny Baiboly?
Ahoana no hanombohanao mamaky Baiboly? Soso-kevitra 10 momba ny fianarana Baiboly Manomboha ny fianaranao amin'ny fangatahana ny fanampian'Andriamanitra. Tsy ilaina ny manomboka mamaky avy amin'ny ...
Iza i Lioka ao amin'ny tantara Jesosy?
Inona no lazain'i Lioka ao amin'ny tantara Jesosy? Mpilalao sarimihetsika / mpilalao sarimihetsika mpilalao sarimihetsika Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Ahoana no ampahafantanao ny tenanao…
1 2 ... 6,039 Manaraka
Salama e! Alberto no anarako. Ao amin'ny bilaogiko, mizara lahatsoratra mahaliana momba ny fotopampianarana katolika, ny fotopampianaran'ny finoana ary ny sakramenta aho.
Fanontaniana: Ahoana ny fomba anoratana ny vavaky ny Tompo amin'ny teny anglisy?
Fanontaniana: Inona no atao hoe batisan'ny rano ho an'ny Kristiana?
Inona no atao hoe olombelona sy fivavahana?
Aiza i Rota resahina ao amin'ny Baiboly?
Inona ny vavaky ny menaka masina?
Fanontaniana napetraka matetika: Inona avy ireo karazana fifamenoana ao anaty fehezanteny iray?
Firy taona no niainan'i Jaona Apôstôly?
© 2021 Synoda
TANDREMO HO AN'NY MPITONDRA TSARA! Ny fitaovana rehetra dia apetraka amin'ny tranokala hentitra ho an'ny fampahalalana sy fanabeazana! Raha mino ianao fa manimba ny zon'ny mpamorona anao ny fandefasana fitaovana, dia aza hadino ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana ary hesorina ny fitaovanao.